Bolivia: Andro 1-n’ny Fiaraha-mientan’ny “Conectándonos” · Global Voices teny Malagasy
Bolivia: Andro 1-n'ny Fiaraha-mientan'ny “Conectándonos”
Voadika ny 26 Desambra 2011 13:25 GMT
Mpandray anjara miisa dimy amby telopolo avy aminà fiaviana samihafa manerana an'i Bolivia no tonga nifamory tao amin'ny “tetikasa mARTadero“, izay toerana ara-javakanto sy kolontsaina ao Cochabamba, Bolivia, tahaka ny ampahany amin'ny fiaraha-mientan'ny “Conectándonos [es]” (Connecting) izay natao ny 12-14, 2011. Maro tamin'ireo mpandray anjara no avy any amin'ny tanànan'i Santa Cruz, El Alto, sy La Paz, kanefa nisy ihany koa ny solotenan'ireo tanàna avy any ambanivohitra toa an'i Caranavi, Llallagua, Tarabuco, ary San José de Chiquitos. Ny mpandray anjara tsirairay dia tonga niaraka taminà faniriana maro isan-karazany ary ny tsirairay dia samy nanana ny traikefany manokana avokoa, nefa izy rehetra dia samy liana tamin'ny fikarohan-dàlana amin”izay fomba hahafahan'ny fampiasàna ny haino aman-jerin'olon-tsotra sy ny fananganana tambajotra mandray anjara amin'ny fiovàna ara-tsosialy ao amin'ny fiaraha-monina misy azy ireo.
Ny tetikasa "mARTadero" ao Cochabamba, Bolivia
Nisy bilaogera Boliviana [es] dimy niaraka tamin'ireo mpandray anjara nandritry ny telo andron'ny fiaraha-mientana, samy nanana ny traikefany manokana ny mpandray anjara tsirairay amin'ny fanatontosàna tetikasa sy fizaràna fahalalàna mba ho làlana iray handrisihana ny hiakaran'ny fandraisana anjara amin'ny habaka niomerika Boliviana. Ireo bilaogera ireo dia mpandrindra sy mpitarika ny atrikasa ihany, kanefa ihany koa amin'ny lafiny iray izy ireo no loharanon'ny valim-panontaniana sy mitondra fanampiana ara-teknika ho n'ny isam-batan'olona avy mandritry ny hetsika. Rehefa manana fahalalàna matanjaka tsara momba ny lafiny ara-teknikan'ny haino aman-jerin'olon-tsotra ireo mpandrindra, ny traikefan'izy ireo amin'ny fananganana tambajotra, ny famoronana fiaraha-miombon'antoka, ary ny fahavitrihana any amin'ny fiaraha-monina misy azy ireo dia singa hafa iray tsy maintsy ilaina hozaraina amin'ireo mpandray anjara amin'ilay fiaraha-mientana.
Ny hevi-dehiben'ilay fiaraha-mientana, izay nokarakarain'ny Global Voices sy ny Rising Voices, dia ny hamantarana ireo mpitarika vao mipongatra any amin'ireo fiaraha-monina ireo, dia ireo izay mpiara-miasa akaiky amin'ireo vondrona ireo, ary ny sasany izay manana andraikitra hampihena ny elanelana misy eo amin'ny fandraisana anjara, mba hanohanana azy ireo sy hamatsiana azy ara-pitaovana miaraka amin'ny fahafaha-manao ara-teknika ilaina ary hevitra mba hamadihana ny fiaraha-monin'izy ireo ho toy ny loharano ho an'ny haino aman-jerin'olon-tsotra.
Fotoana fifanakalozan-dresaka tamin'ny Andro 1
Nanomboka tamin'ny famintinana fohifohy momba ny zava-misy ankehitriny mahakasika ny fomba fampiasàn'ny Boliviana ny aterineto ny atrikasa. Ny fifandraisana misy eo amin'ny fihisatry ny hafainganam-pandeha sy ny halafon'ny fahafaha-miditra amin'ny aterineto no lohahevitra niraisana nandritry ny fifanakalozan-dresaka. Ireo izay mipetraka any amin'ny faritra tena ambanivohitra no tena naneho hevitra betsaka momba ny fahasarotan'ny asa sy ny fifandraisana entin'ireo fanamby ireo. Ohatra, mpandray anjara iray monina any an-tanànan'i Cobija, akaikin'ny sisintany Breziliana, no niteny fa moramora kokoa ny miampita mankany amin'ny firenena mpifanolo-bodirindrina mba hiditra amin'ny aterineto, noho ny miankin-doha amin'ny koriana milona be sy lafo dia lafo ao an-toerana.
Tamin'ny fiandohan'ny andro faharoa, ireo mpandray anjara dia niasa tanaty vondrona maromaro hamoaka lohahevitra mikasika ny tetikasa haino aman-jerin'olon-tsotra manakaiky kokoa ny olona. Ho an'ireo izay mety nanana eritreritra kely ny amin'izay ho endrik'ilay tetikasa, dia nisy fampahafantarana fohifohy mikasika ny ohatra avy amin'ny Rising Voices, ary hatramin'ireo tetikasa eto an-toerana. Naheno tantara maro avy amin'ny Friends of Januária, FOKO, sy ny tetikasa Exploring Taboos, ary nanadihady momba ny tanjona fototr'ilay tetikasa, ny fitaovana nampiasaina, ny fomba nizaràna fahalalàna, ny fiaraha-miombon'antoka voajoro, hatramin'ireo fanamby natolotra. Fanampin'izany, i Ruben Hilare avy ao amin'ny tetikasa Jaqi Aru dia nizara ny tantara mikasika ny antony sy ny fomba nataon'ny vondrom-piarahamonin'ireo mpandàla ny teny Aymara nanomboka ny fandraisan'andraikitr'izy ireo. Taorian'ny fampahafantarana, dia nizara ho tarika maromaro ireo mpandray anjara mba hijereny ny tetikasan'ny hafa avy amin'ny manerana an'i Amerika Latina mba hahafantarany amin'ny ankapobeny ny mikasika ireo kasinga itovizan'ny tetikasa.
Fotoam-pivorian'ny vondrona madinika tamin'ny Andro 1
Nandritry ny fotoana fisafidianana, dia nitondra lohahevitra iray azy manokana ny mpirotsaka, toy ny Tontolo Iainana, Zavakanto & Kolontsaina, Fanabeazana, Ara-pananahana & Fahasamihafan'ny Lahy sy vavy, Fangaraharàna ho an'ny daholobe, ary ny Vondrom-piaraha-monin'ny Vazimba Teratany. Ny fampivondronan'ireo mpandray anjara arakaraky ny lohahevitra no hanome ny fototra iaingan'ireo vondrona madinika izay hanomboka handrafitra tetikasa iray amin'ny fiandohan'ny Andro 2.
8 ora izayKenyà
8 ora izay
Hotrandrahan'ny Fandaharanasa “Exchange Live” ny lanjan'ny fikatrohana nomerika iraisam-paritra ho an'ny fiteny
13 ora izayBlaogim-Piarahamonina GV
Vaovao farany Lingua volana Jolay 2020
Misotra for the translation!
31 Desambra 2011, 01:51
Hiresaka koa -> Eddie Avila
Septambra 2020 29 Lahatsoratra